गौरी संकरले नगद १५ प्रतशत लाभाशं बाँड्ने, साधारण सभामा कृषकलाइ निशुल्क बंगुर पाठा वितरण - ।। Naya Kuro ।।
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १८:१८ November 9, 2019 Naya KuroLeaveaComment on गौरी संकरले नगद १५ प्रतशत लाभाशं बाँड्ने, साधारण सभामा कृषकलाइ निशुल्क बंगुर पाठा वितरण
पाँचथर ।। जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालनमा रहेको गौरी संकर कृषि सहकारीले पाँचौ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष केशव बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभामा संस्थाका कोषाध्यक्ष सोम कुमार थापाले बार्षिक आय ब्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस बर्ष २८ लाख ८९ हजार रुपैया आम्दानी गरेको संस्थाले १९ लाख ६२ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । अघिल्लो बर्षको तुलानामा यो बर्ष संस्थाले ६ लाख २६ हजार रुपैयाले शेयर पुँजी बृद्धि गरेको समेत संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले गरेको मुनाफाबाट यो बर्ष १५ पञ्तिशत नगदन लाभाशं वितरण गर्ने समेत जनाएको छ । कार्यक्रममा लेखा समिति संयोजक सुर्यकुमार मगरले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन, केशव प्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक प्रतिवेदन, सर्ब सहमतले पारित भएको छ ।
२०७१ सालमा २७ जना सदस्ले सुरुभएको संस्थाले हाल ४ सय १० जना शेयर सदस्य पुर्याएको छ । प्रत्येक बर्ष जस्तै संस्थाले यस बर्ष समेत नियमित बचतकर्ता तर्फ पार्वता खेवाङ, पदम ब. पहाडी, रमेश पुलामी मगर, सिता न्यौपानेलाई, उत्कृष्ट कर्जा तर्फ विपाशा फेजुङ, गजेन्द्र ठटाल, सुरेश प्रकास जवेगु लाई कदर पत्र सहित सम्मान गरेको छ । यस्तै संस्थाले यो बर्ष देखी आफ्ना ६ जना शेयर सदस्यलाई निशुल्क सुंगुरको बच्चा प्रदान गरेको छ । सुंगुर पाल्न इच्छुक शेयर सदस्यलाई क्रमशः निशुल्क बच्चा दिदै लगिने संंथाले जनाएको छ ।
पहिलो बर्ष सिता राइ, सुरेश प्रकाश नेम्वाङ, सुन्दर थापा, दिलमाया गुरुङ, विष्ुणु श्रेष्ठ, र मदनकुमारी लाई १–१ थान सुगुर प्रदान गरिएको हो । उहाँहरुले आगामी बर्ष संस्थालाइ १ थान सुंगुरको बच्चा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइएको छ । सोही अनुसार क्रमशः सबै सुंगुर पाल्न इच्छुक शेयर सदस्य सम्म सुंगुरको बच्चा पुर्याउने लक्ष्य संस्थाले राखेको छ । फिदिम १ लखनमार्गमा रहेको कार्यालय मार्फत आइएमइ सेवा समेत प्रदान गरिरहेको सहकारीले यसैबर्षदेखी सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको सेवा समेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । १ करोड २४ लाख ७६ हजार १ सय ४६ रुपैया कर्जा लगानी पुर्याएको यस संस्थाले आगामी दिनमा बजार सरसफाइ, नियमित वोनष वितरण, अटोरिक्सामा लगानी जस्ता कार्यक्रम सञ्चलाको तयरी गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष केशव प्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
१ करोड २४ लाख ७६ हजार १ सय ४६ रुपैया कर्जा लगानी पुर्याएको यस संस्थाले आगामी दिनमा बजार सरसफाइ, नियमित वोनष वितरण, अटोरिक्सामा लगानी जस्ता कार्यक्रम सञ्चलाको तयरी गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष केशव प्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
शनिलाई किन क्रुर ग्रह भनिन्छ ? सकारात्मक प्रभावका लागी एसाे गर्नुहाेस….
आज – २४ कार्तिक २०७६ (10 Nov. 2019) आइतवार को राशिफल
पाँचथरको नागि क्वारेन्टिनमा रहेका एकजनामा “आरडीटी” पोजेटिभ
२० बैशाख २०७७, शनिबार २०:४६ May 2, 2020 Naya Kuro
पाँचथर हत्या काण्ड आरोपीतकी वहिनीले खुलाइन यस्तो रहस्य (भिडियो)
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:२५ May 24, 2019 Naya Kuro
यस्तो रह्यो फाल्गुनन्द गाउँपालिको सातौ गाउँसभा
९ असार २०७७, मंगलवार २२:२२ June 23, 2020 Naya Kuro
पीसीआर परीक्षण ‘पोजेटिभ’मा गम्भीर त्रुटि, ढाकछोप गर्न खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
आज २४ आषाढ २०७७ (July.08) बुधवार को राशिफल
आज २३ आषाढ २०७७ (July.07) मंगलवार को राशिफल